Mitsubishi Space Star occasion 2004 in Deurne - AutoWeek.nl
1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!!
Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!! Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun SE AIRCONDITIONING!!!!!!
KM stand 202.984
Datum eerste toelating 13 januari 2004
Mooie en zeer goed rijdende Mitsubishi Space Star met onder andere een airconditioning, elektrische ramen, centrale vergrendeling, licht metalen velgen, metallic lak, trekhaak, radio / cd speler, elektrisch verstelbare buitenspiegels, zonwerend glas, etc.....
Lengte x breedte x hoogte 4.050 x 1.715 x 1.515 mm
Ik wil graag een proefrit maken met Mitsubishi Space Star met kenteken 08-NP-RD...
Ik heb een vraag over de Mitsubishi Space Star met kenteken 08-NP-RD...
Ik wil graag mijn auto inruilen voor de Mitsubishi Space Star met kenteken 08-NP-RD...
13vergelijkbare Mitsubishi Space Star occasionsVergelijk ze allemaal